Story | my world, my perspectives
ऊ मेरो बाल्यकालको साथी। एउटै टोलमा बस्छौँ तर नभेटेको दुईतीन वर्ष भैसकेको थियो। बाटोमा जम्काभेट भएपछि हामी सँगै टहलिन हिँडेका थियौँ।
झपक्क साँझ पर्दासम्म जेठको उखुमले तातेको सतह सेलाइसकेको रहेनछ। हिँड्दा कानमा शीतल हावाले चुमेजस्तो भएपनि बस्दा दूबोमुनि बाट आएको तातोपन फिलाले महसुस गरे। बरु कमिला पनि तर्न सक्लान्‌झैँ देखिने नदीबाट एक हरक दुर्गन्ध नाकमै ठोसिन आइपुग्यो, बल्लबल्ल चलेको हावाको निस्तेज वेगसँगै।
“अस्ति भर्खर् ‘हाम् गरम्’ महाराजले मुख धोएको भन्या हैन? बोतल्‌बाट मिनेरल् वाटर् खन्याको होला!” व्यङ्ग्यमिश्रित विष्मयभावमा ऊ फत्फतायो।
दिनभरि गर्मीले तातेको मथिँगललाई मैले थप बिथोल्न चाहिनँ। भनिदिएँ, “यतैकतै हो त्यो सब नाटक भएको।”
“लाइटर् त बोक्या’छौ नि?” उसले विषयान्तर गर्‍यो।
“कोर्‍यो कि बल्यो,” मैले एकालाप गरेँ, “क्या गज्जब लाइन् छ!” एकै चोटमा नबलेर के भो र!
शास्त्रीय सङ्गीत सिक्ने मेरो पनि रहर थियो। चञ्चल मन २० वर्ष अघिको फ्ल्यास्‌ब्याक् गर्न थाल्यो।
अतुल हावामा घुम्रे केश हल्लाउँदै तबलाका टाउकामा औँला नचाउँथे। सरिता पनि हुन्थिन् उसै गर्दै। मनोज बासुरीका प्वाल छोप्दै त्यसको मुखमा मुख फुक्थे। उनीहरू बेलाबेला टाउको हल्लाउँदै, आँखा नचाउँदै विभिन्न भावभङ्गी बनाउँथे। रागका नाम र भेद नजानेपनि म तिनको मधुरतामा लट्ठिन्थेँ।
सानैदेखि ऊ रिस ओकल्नुपर्दा त्यो शब्द भन्छ। त्यसो गर्दा उसका गाला डर लाग्ने गरी राता र आँखा निष्प्राण देखिन्छन्। तर यसपालि मैले उसको आँखा हेर्न भ्याइँन। म पनि उसले हेरेतिरै हेर्दै थिएँ।
सम्झनाको बिस्कुन फुक्यो र भूतका धूमिल दृश्य आँखा अगाडि सल्बलाएझैँ गर्न थाले।
तीनचार घुट्को लाएर बिर्को बन्द गर्यो र बोतल् मतिर सारिदियो। अनि चुरोटको बट्टा तान्यो। सलाई मेरो हातमा थियो, ऊ अडियो।
“हावा…,” मैले पूरा जवाफ दिन पाइँन। व्यङ्ग्य गर्न भ्याइहाल्यो, “कहिलेदेखि दिन थाल्यौ आफैँलाई दागबत्ती?”
“कहिलेकाहीँ म पनि तान्छु। बियर् तान्दै दुईचार सर्को लाउँदा आनन्द हुन्छ,” उसले भन्यो, “तर चुरोट धेर खानुहुन्न।”
“टार्, हाइड्रोकार्बन्‌ले क्यान्…,” ऊ जे भन्दैथ्यो त्यो मैले सुन्नै चाहिँन। बरु पर हुइँकिँदै गरेका स्कुटर् र गाडीको आवाजतिर कान ठाडो पारेँ।
बाटोछेउ घाँसमा स्कुटर् पल्टाएर दुइटी केटीले अलि पर काइँयोको रूखमुनि आसन जमाए। उनीहरूको अट्टहासले उसको ध्यान खिचेछ। पुलुक्क उनीहरूतिर हेर्दै मेरो ढाडमा धाप मार्‍यो।
“गर्ल्फेन्ड् बनायौ कि छैनौ?” उता इसारा गर्दै उसले सोध्यो।
“मिथुन भनेको जुम्ल्याहा हो,” ग्रिक् मिथकको सन्दर्भ जोड्दै उसले तर्क गरी। “अश्विनीकुमारहरूको कथा पनि छ यता। बिर्स्यौ?”
चरम असहमतिको जनाउ दिँदै उसले थप कुरा गर्न चाहिन। उसको किताबी ज्ञान बृहद् थियो। आफूले जानेको र मानेको कुरामात्र सही मान्ने जिद्दी स्वभाव पनि।
म चुप लागिदिएँ। सायद उसले त्यसैलाई जीत ठानी।
स्प्रिङ्फिल्ड्को एउटा रेस्टुरन्ट्मा सर्वथासँग मेरो पहिलो भेट भएको हो।
एउटा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्न भर्जिनिया जाँदा पुराना साथीभाइले रात्रिभोजका लागि निम्त्याएका थिए। फर्किने अघिल्लो साँझ पोकोपन्तरो बाँध्ने चटारो भएपनि नाइँ नभनी म गएको थिएँ। निम्तो मान्न अनि मैत्रेयीका लागि सर्वथालाई भेट्न। केही महत्वपूर्ण कागजपत्र र कोसेली ल्याइदिनु पर्ने रहेछ।
भिसा नपाएकाले मैत्रेयी जान पाएकी थिइन। तर सर्वथा पुरानो योजनाअनुसार नै कन्टकीबाट वासिङ्टन् घुम्न आएकी थिई।
हुन त त्यही बिहान मैत्रेयीले ग्रुप्-च्याट्मा हाम्रो चिनापर्ची गराएकी थिई। तर अगाडि पर्दा मैले उसलाई ठम्याउन सकिनँ। सर्वथा तस्बिरमा भन्दा धेरै फरक रहिछ।
“सपिङ् गरिसक्यौ त?”
“ऊ मेरी साथी हो। हामी सँगै काम गर्छौँ,” अर्कीतिर इसारा गर्दै उसले भनी। “डीसी घुम्न आएका। मैत्रेयी पनि आउन पाएकी भए क्या रमाइलो हुन्थ्यो। संयोग पनि जुरेको थियो। अर्को हप्ता मेरो ग्र्याजुएसन् …!”
“छ फिटे ज्यान तिम्रो देशमा अटाउँछ र सधैँ?” होच्याएको बुझेर मैले ओठेजवाफ लाएँ।
“सर्वथाको ग्र्याजुएसन् पनि थियो। पापीहरू…!”
“म साथीको घरमा बसेको छु.,” मैले भनेँ, “ऊ लिन आउँदै होली।”
“तपाईँ झुक्किनु भयो। म यहाँको कर्मचारी है।” मैले यथार्थ भनेँ ।
“सरी फर् दि इन्सिडेन्ट् दि अदर् डे,” औपचारिक परिचयपछि लजाउँदै उसले भनी।
“हजुरले चहानुभएको भए अल्मल्याइदिन सक्नुहुन्थ्यो। सबै काम बिग्रिने गरी!”
एकदिन म प्रोफेसर्‌सँग छलफल गर्दै थिएँ। ढोकापट्टि फर्केर बसेको थिएँ। सामुन्नेको कोठामा मैत्रेयी देखापरी र मुख बङ्ग्याउँदै, नाच्दै जिस्क्याउन थाली। मेरो ध्यान भङ्ग भैसकेको थियो। बल्लतल्ल हाँसो भने थामेको थिएँ। त्यो श्वेतभैरवी भने नाच्न छाड्ने हैन। म कुर्सीबाट उठेर भित्तातिर फर्किदिएँ।
मैले उसलाई मनपराउन थालेको कुरो मैत्रेयीलाई थाहा थियो। एकदुई चोटि आँखा झिम्क्याइदिएको थिएँ। त्यसो गर्दा ऊ आँखा तरेझैँ गरेर हाँसिदिन्थी।
बिस्तारै स्काइप् र जिमेल् च्याट्मा कुरा हुन थाल्यो। दिनदिनैजसो।
दुईजनाको नितान्त निजी कुरामा बोल्ने उसको के अधिकार? तर केही भनिनँ।
“उसको ब्याइफ्रेन्ड् छ। अलि कम्प्लिकेसन् छ क्या!” उसले थपी।
मैत्रेयीको प्रेमी नेवार रहेछ। युरोपतिर अर्थशास्त्रमा पिएच्डी गर्दै गरेको।
बुवा कूटनैतिक सेवामा रहेर विदेश चहारेका भएपनि अन्तर्जातीय सम्बन्ध स्वीकार्न नमान्ने सङ्कीर्ण बाहुन।
कोसेली लिएर भेट्न आई। नीलो रङ्गको कमिज रहेछ। कसरी थाहा पाई उसले मलाई मनपर्ने रङ्ग?
निजी कामले तीन हप्ता काठमाडौँबाहिर जानुपर्‍यो। फर्केर आउँदा ऊ काम गर्न थालिसकेकी रहिछ।
“आई मिस्ड् यु अ लट्,” उसले फोनमा भनी।
ऊ मलाई साथी मान्दिरहिनछ उसोभए! कारण थिए होलान् छोड्नुमा र नभन्नुमा। तर यो प्रसङ्गले मलाई सहकर्मी र साथीको भेद बुझाइदिएको थियो।
“के छ, बेपत्ता कुमारीज्यू?” जिमेल् च्याट्मा उसको नामअगाडि हरियो बत्ती बलेको देखेर लेखेँ।
“हँ? व्हाट् डज् द्याट् मिन्?” (What does that mean?)
“हाउ आर् यु मिस् मिसिङ् भर्जिन्? (How are you Missing Virgin?) भनेको!!! अब त बुझ्यौँ नि? :D”
मैले अरु कुरा गर्ने आँट गरिनँ।
अनिद्रा, अरुचि र छट्पटी। सपना र बिपना छुट्याउन नसक्ने स्थिति। विस्मृति र विभ्रम। अनि यो शरीर मेरो हैन भन्ने चरम भावना। थपिएको थियो सर्वथासँगको स्युडोसंवाद। कम्पल्सिभ् डिस्अर्डर् बनेर।
चिकित्सकले पहिला पोस्ट् ट्रमाटिक् स्ट्रेस् डिस्अर्डर् भने। विभिन्न परीक्षण पछि दुर्लभ खालको न्युरोडिजेनरेटिभ् रोगको शङ्का गरे।
“यही कुरा तिमी मैत्रेयीलाई पनि भन्थ्यौ। स्टप् दिस् नन्सेन्स्, प्लिज्!”
“अझ तिमी बारम्बार गायब भैराख्छौ। बेवास्ता गर्छौ। साथी बन्नुका शर्त पूरा गर्दैनौ।” उसको जवाफ डरलाग्दो थियो।
अकष्मात् मलाई मैत्रेयीसँग रिस उठ्यो।
“सर्ग, तिम्रो प्युरिटी तिम्रो समस्या हो। धेरै नसोच। जीवनलाई रङ्गीन बनाउनु पर्छ। स्टार्ट् डेटिङ् चिक्स् एन्ड् ह्याभ् फन्, म्यान्!”
“क्याली, कुनै दिन मैले तिमीलाई चिनिनँ भने तिमी कति रिसाउँछ्यौ होला है?” केटौले पारामा चुरोटको धूवाँले हावामा सर्वथा लेख्दै मैले फेरि स्युडोसंवाद गरेको थिएँ।
तिनै केटीहरू रहेछन्। पारि बलेको गाडीको हेड्लाइट् उनीहरूमा पर्यो।
म त्यता नहेर्न कोसिस गर्दै थिएँ। अकष्मात् मेरा आँखा एउटीको अनुहारमा पर्यो।
दोहोर्‍याएर हेरँ। त्यो भ्रम थिएन।
By Himanshu Kaishuvam  Posted in Story	 Tagged नेपाली कथा, bagmati, fiction, kathamandap, literature, monologue, nepali story, story